Ny tsihy fofona tsara indrindra ho an'ny alika | World Dogs
Ny tsihy olfactory ho an'ny alika dia karazana kilalao mahasoa indrindra amin'ny alika izay hyperactive ary izany, ankoatra ny diany isan'andro, dia mila fatra fanatanjahan-tena fanampiny (na dia amin'ity tranga ity aza dia ara-tsaina) mba hampitony.
Izany no antony Androany isika dia tsy hiresaka momba ny tsihy tsara indrindra ho an'ny alika ihany, fa koa ny fomba fampiasana azy ireo, inona ny tombontsoa ananany, aiza no hividianana azy sy ny maro hafa. Ary koa, raha mila bebe kokoa ianao, dia manoro hevitra ity lahatsoratra mifandraika amin'izany izahay momba ny mpampihinana alika: tantarainay aminao ny zava-drehetra.
TOPSEAS Snuffle Mat ho an'ny...
Karpet Olfactory AWOOF ...
Tonsooze Snuffle Mat ho an'ny...
Ny fofona DaiWeier Rug...
Tsiky masoandro Rug...
McNory Snuffle Mat ho an'ny ...
1 Ny tsihy fofona tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Tsihy fanofanana olfactory
1.2 Tsihy malefaka misy fitsapana isan-karazany
1.3 Tsihy malefaka mba hialana sasatra
1.4 tsihy olfactory azo aforitra
1.5 Karpet ho an'ny alika lehibe
1.6 Karpet izay mivadika ho vilia baolina
1.7 Tsihy miendrika voninkazo
2 Inona no atao hoe tsihy olfactory?
3 Inona no tombony amin'ny tsihy fofona?
3.1 Ny asa mampitony ny fofona fofona
4 Torohevitra momba ny fampiasana tsihy olfactory
5 Aiza no hividianana tsihy fofona ho an'ny alika
Tsihy fanofanana olfactory
IEUUMLER Snuffle Mat ho an'ny...
Anisan'ireo tsihy olfactory ho an'ny alika hita ao amin'ny Amazon, ity iray ity dia miavaka, eo amin'ny 45 sm eo ho eo amin'ny lafiny iray ary misy amin'ny loko tena mahafinaritra. Ny famolavolana dia tena tsotra nefa tsy latsa-danja amin'ny fahombiazany: andian-damba maromaro mipetaka amin'ny fototra plastika misy lavaka, izay ahafahanao manafina ny loka. Ny fikasihana ny lamba dia malefaka sy mahatohitra ary, noho ny habeny, dia tonga lafatra ho an'ny alika kely na antonony.
Ity karipetra ity dia manatanteraka tanteraka ny asany, satria tsy maintsy mitarika ny moron'ny alikanao fotsiny ianao mba hahitana ny loka ary hisambotra ny fiasan'ny lalao, izay mety ho azy mba tsy hisakafo haingana.
Tsihy malefaka misy fitsapana isan-karazany
FREESOO Snuffle Mat ho an'ny...
Ny endrika somary hafa amin'ny karipetra olfactory hafa dia ity modely ity, izay misy fototra malefaka sy fitsapana maromaro izay hanafenana ny loka: paosy, tanany, peratra lamba ary na dia karazana voninkazo aza dia hiantoka fa tsy ho leo ny alikanao amin'ity vokatra ity.. Ny lamba dia mitovy amin'ny flannel, noho izany dia tena malefaka, afa-tsy ny fototra, izay tsy mitongilana. Ankoatra izany, dia azo sasana amin'ny milina. Farany, noho ny fandrefesana (36,5 sm amin'ny lafiny lava indrindra) dia asaina ampiasaina indrindra amin'ny alika kely.
Tsihy malefaka mba hialana sasatra
Ity tsihy anti-stress ity, tena mitovy amin'ny teo aloha, dia mety amin'ny alikanao miala sasatra, indrindra raha hyperactive izy. Izy io dia ahitana toerana samihafa ahafahantsika manafina ny loka (peratra, paosy, karazana tanany, ruffles ary iray boribory vita amin'ny lamba) ary avelao ny biby fiompintsika hahazo fofona be. Ity fanazaran-tena ara-tsaina ity dia hamela anao ho reraka sy ho faly ary ambonin'izany, mifototra amin'ny fanazaran-tena-valisoa, dia miasa tsara ho an'ny alika ketraka ihany koa.
tsihy olfactory azo aforitra
Ho an'ireo izay mitady vokatra izay, ankoatry ny mahomby, tsara tarehy, dia hahita safidy tsara amin'ity karipetra tsara tarehy ity. Miendrika voninkazo izy io, na izany aza, ankoatra ny lamban-damba, dia afaka mahita toerana kely hafa hanafenana ny loka koa isika, toy ny peratra lamba, lolo misy sosona maromaro na karazana dumplings. Ankoatra izany, azo aforitra izy io, ka rehefa vita ny fampiasana azy dia azonao atao ny mamerina azy mora foana.
Karpet ho an'ny alika lehibe
Ity tsihy ity izay mirefy 50 sm eo ho eo amin'ny tapany lava indrindra dia mety tsara ho an'ny alika lehibe kokoa, ankoatra izany, tsy mitovy amin'ny efa hitantsika hatreto. Izy io dia ahitana andian-bolo, mitovy amin'ny an'ny tsihy fandroana, matevina ary eo amin'ny 2 sm eo ho eo, izay ahafahantsika manafina ny loka. Ity vokatra ity dia misy kitapo fitahirizanaAzo apetraka ao anaty milina fanasan-damba izy io ary misy kaopy suction mba tsy hihetsika, na dia misy hevitra aza manasongadina fa tsy mandeha tsara izy ireo.
Karpet izay mivadika ho vilia baolina
Ity karipetra mahaliana ity dia manana fiasa roa: Voalohany indrindra, toy ny lamban'alika efa hitanay, izany hoe afenina eo anelanelan'ny lamban-damba ny loka mba hahitan'ny biby fiompinay azy. Amin'ny lafiny iray, amin'ny alàlan'ny mekanika tsotra dia miakatra ny sisin'ny tsihy ary lasa vilia baolina izay tena ilaina amin'ny fampiofanana ny alikanao hihinana miadana kokoa.
Tsihy miendrika voninkazo
Ary miafara amin'ny tsihy olfactory izay ahafahan'ny alika mamofona araka izay tiany rehefa mitady ny lokany. Ny afovoany no tena toerana fikarohana ary miendrika voninkazo vita amin'ny tapa-damba, na dia misy lalao hafa manodidina aza. Ankoatra izany, azo aforitra izy io, ka azonao atao ny mitahiry azy ao anatin'ny fotoana fohy. Ny lamba dia malefaka sy mateza ary azo sasana amin'ny milina. Farany, misy tady roa ny tsihy mba hahafahanao mamatotra azy amin'ny fanaka ary tsy hikorontana.
Inona no atao hoe tsihy olfactory?
Ny tsihy fofona ho an'ny alika dia karazana kilalao mamela ny biby fiompinao hampihatra ny sainy, mialà sasatra ary, ambonin'izany, mahazo sakafo.
Ny fototry ny fiasan'ireo zavatra ireo dia tena tsotra: Matetika izy ireo dia misy karazana karipetra misy tady lavalava mipetaka eo amin'ny fototra plastika ahafahan'ny alika mamofona. amin'ny fitadiavana ireo loka izay nafenina tao aloha. Araka ny hitanao, ny fandidiana dia mitovy amin'ny an'ny labiera plastika izay nafenina ny loka ary tsy maintsy nieritreritra ny alika mba hahazoana azy.
Raha fintinina, ny fomba ahafantaran'ny alika ny manodidina azy amin'ny fofona (izay efa ho zato heny mahery noho ny olombelona), hevitra tsara foana ny tsihy toy izany.
Inona no tombony amin'ny tsihy fofona?
Toy ny kilalao rehetra, Ny tsihy fofona ho an'ny alika dia manana tombony maromaro izay hanampy ny alikanao ho sambatra kokoa ary izany, amin'ny ankapobeny, dia tena hahasoa ny fahasalamanao, ohatra:
voalohany, avelao ny alika hampihatra ny saina tsy mila toerana malalaka.
Ny fampiasana ny saina irery dia efa misy tombony maro, ohatra, a fanatsarana ny fahasalamana, fampihenana ny adin-tsaina, fialam-boly amin'ny alàlan'ny alika sy ny fisorohana ny fahasorenana.
Amin'izany, asa fofona dia tena mahafinaritra ho an'ny alika.
Farany, tsihy toy izany manampy ny alika hihinana miadana kokoa, satria tsy maintsy mitady ny sakafony izy alohan'ny hisakafo.
Ny asa mampitony ny fofona fofona
Hitantsika ny soa azo avy amin'ny tsihy fofona ho an'ny alika, na dia mendrika ny hieritreritra ny iray amin'ireo tombontsoa lehibe azony: ny fampitoniana asa ireo kilalao.
Amin'ny ankapobeny (araka ny tokony ho fantatrao, misy alika amin'ny zava-drehetra) Ny tena asa ny tsihy dia ny manome fanatanjahan-tena ara-tsaina ny biby fiompinao, izay, rebound, manampy hampitony azy. Noho izany, ny tsihy dia hanentana ny fofon'ny alikanao, izay rehefa avy nankafy ny famporisihana mandritra ny fotoana maharitra (ary mahita valisoa isan-karazany) dia hahatsapa ho tony kokoa, tsy ho sahiran-tsaina ary ho faly kokoa.
Izany rehetra izany tsy vitan'ny hoe manampy ny alika hahatsapa tsara kokoa momba ny tenany sy ny tontolo manodidina azy (Ity dia momba ny fampiasana ny ezaka mahazatra - valisoa), fa manampy amin'ny fisorohana ny fitondran-tena manimba, toy ny manaikitra sy mikaroka fanaka na lamban'olona. Ireo vokatra ireo koa dia mety tena manampy amin'ny alika hyperactive, izay mila mihoatra noho ny diany isan'andro mba hampiasa ny heriny.
Torohevitra momba ny fampiasana tsihy olfactory
avy eo Hanome torohevitra vitsivitsy mety hanampy anao izahayIndrindra raha vao sambany ianao no mampiasa ny iray amin'ireto kilalao ireto:
Na dia izao tontolo izao aza ny vokatra tsirairay, Ny ankamaroan'ny tady doggie dia azo sasana amin'ny milina amin'ny programa malefaka, ary asio maina na maina ny rivotra. Ahetsiketsika aloha ilay izy mba hanesorana ny loka sy ny potipotiny. Jereo koa ny etikety vokatra mba hahazoana antoka ny fomba tokony hitehirizana azy.
Aza avela hampiasa tsihy mihitsy ny alikanao raha tsy misy ny fanaraha-maso anaosatria mety hanimba ny tenanao ianao na hitelina ampahany kely na nokaiketinao.
Esory tsy ho eo imasonao izy ireo rehefa tsy ampiasaina. Amin'izany fomba izany dia hampifandray izany amin'ny fotoana manokana izy ireo ary hanana faniriana bebe kokoa ny hilalao.
Azonao atao ny mametraka loka, fa koa singa hafa fantatrao fa mety aminy (toy ny anana sasany). Ataovy azo antoka fa tsy misy poizina izy ireo.
Aiza no hividianana tsihy fofona ho an'ny alika
Misy toerana maro, ny sasany tena tsy nampoizina, aiza afaka mahita tsihy fofona ho an'ny alika ianao. Ohatra:
En Amazon dia hahita be dia be ny modely isan-karazany, samy manana ny lokony, ny asany sy ny toetra. Raha nanao fifanarahana tamin'ny Prime ianao, ankoatra izany, dia entin'izy ireo any an-tranonao tsy misy dikany izany.
En fivarotana manam-pahaizana manokana toa an'i Zooplus na TiendaAnimal dia manana safidy mahaliana ihany koa izy ireo. Ny tsara amin'ireo safidy ireo dia azonao atao ny mandeha mivantana any amin'ny magazay hijerena hoe ohatrinona ny habeny, ny fitaovana ... ary anontanio ny mpanampy fivarotana izay safidy tsara indrindra ho anao sy ny biby fiompinao.
Farany, ao amin'ny webs amin'ny zavatra vita tananaToa an'i Etsy, hahita safidy maro hafa koa ianao. Amin'ny toe-javatra sasany dia azo zahana tanteraka izy ireo, ka azonao atao ny misafidy ny loko, ny fitaovana na ny endrika tianao indrindra.
Ny tsihy fofona ho an'ny alika dia kilalao izay miasa mahagaga mba hampitony sy hampiofana ara-tsaina ny alikantsika. Lazao anay, efa nanandrana ny iray amin'ireo karipetra ireo ve ianao? Nahomby ve izany? Manana fika ve ianao rehefa mampiasa azy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny tsihy fofona tsara indrindra ho an'ny alika